China Hitachi excavator undercarriage ampahany EX200 track / bottom-roller vita any Shina mpanamboatra sy mpamatsy |Hely
Hitachi excavator undercarriage ampahany EX200 track/roller ambany vita tany china
akorandriaka akorandriaka fitaovana: 50Mn/45 #
hamafin'ny tany: HRC48-58
Ny halalin'ny famonoana:> 7mm
Vorona fitaovana: QT450-10
Lanja: 40 kg
Haben'ny fametrahana: 290mm, 102mm
Inona no atao hoe track roller?
Ny kodiarana mpanohana dia ampiasaina hanohanana ny lanjan'ny traktera, raha mihodina eo amin'ny lalamby (rohin'ny lalamby) na eny ambonin'ny lalan'ny crawler.Ampiasaina ihany koa izy io mba hamerana ny crawler sy hisorohana ny lateral slippage.Rehefa mihodikodina ny traktera, dia manery ny lalamby hivezivezy amin'ny tany ny rollers.
Matetika ao anaty fotaka, rano ary vovoka ny roule fanohanana, ary misy fiatraikany mahery vaika, noho izany dia ilaina ny manana famehezana azo antoka sy fehikibo mahatohitra.
Famaritana momba ny garantie
1. Ao amin'ny tontolo voajanahary ara-dalàna, herintaona na miasa 2000 ora garantie.Ny tontolo iasana dia tena henjana (toy ny sira sy ny tany alkali, sns), na mirotsaka amin'ny asa fanorotoroana ny manodidina rehetra, tapaka ny fotoana fiantohana.
2. Ny fikorianan'ny menaka amin'ny tombo-kase solika, menaka-nozzle, ny andaniny roa amin'ny shaft sy ny sisa, ny vaky ao amin'ny weld dia azo soloina mandritra ny fiantohana.
3. Azo soloina izy io rehefa tapaka ny tohatra mandritra ny vanim-potoana fiantohana.
4. Raha ny mpampiasa an'ity vokatra ity dia hita fa mandrotsaka dibera ao anatiny, dia tsy omena ny garantie.Ny modely sy ny habeny dia tsy mifanaraka, ny fametrahana an-tery, ka miteraka fahasimbana amin'ny vokatra, tsy misy fiantohana.
5. Ireo mpampiasa izay manolo 3 na latsaka amin'ny fotoana iray dia tsy azo antoka.
teo aloha: CAT excavator undercarriage ampahany 345/349 track/roller ambany vita any china
Manaraka: Komatsu excavator undercarriage ampahany PC200 track/roller ambany vita tany china
Ambongadiny tsara indrindra Excavator Front Idler Roll ...
ihi lalana aloha idler assy ho an'ny mini excavator j...
Excavator undercarriage ampahany carrier / up roller ...
DH360/370 2713-0032RC Siny Nify
Famatsiana orinasa Shina R225 R225-7 R290 R300 R305 ...
Track Roller Bottom Roller Lower Roller Ho an'ny Min...
Roller ambony rojo, Kx161-3 Top Roller, Up Roller, Roller mpanohana ambony, Bulldozer Carrier Roller, Roller mpitatitra ambony,